Vaovao - Teknolojia | Inventory ny crux ny carton very sy ny fepetra fanatsarana.
Ny fahaverezan'ny orinasa baoritra dia singa iray lehibe manohina ny vidiny. Raha voafehy ny fatiantoka dia afaka mampitombo ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny lafiny lehibe izy ary manatsara ny fifaninanana amin'ny vokatra. Andao hofakafakaina ireo fatiantoka isan-karazany ao amin'ny orinasa baoritra.
Raha tsorina, ny fatiantoka totalin'ny orinasa baoritra dia ny habetsaky ny fidiran'ny taratasy manta aondrana ny habetsaky ny vokatra vita apetraka ao anaty fitehirizana. Ohatra: ny fidiran'ny taratasy manta isam-bolana dia tokony hamokatra metatra toradroa 1 tapitrisa, ary ny haben'ny fitehirizana vokatra dia 900.000 metatra toradroa, avy eo ny fatiantoka totalin'ny orinasa amin'izao volana izao = (100-90) = 100.000 metatra toradroa, ary ny ny tahan'ny fatiantoka tanteraka dia 10/100 × 100% -10%. Ny fatiantoka tanteraka toy izany dia mety ho isa marobe. Na izany aza, ny fizarana fatiantoka isaky ny fizotrany dia ho mazava kokoa, ary ho mora kokoa amintsika kokoa ny mitady fomba sy fahombiazana hampihenana ny fatiantoka.
1. Fahaverezan'ny baoritra amin'ny baoritra
● Fako ny vokatra simba
Ny vokatra tsy mandeha dia manondro ireo vokatra tsy mendrika rehefa notapahan'ny masinina fanapahana.
Famaritana famaritana: Faritra fatiantoka = (refy manapaka × isa fanapahana) × halavan'ny fanapahana × isan'ny antsy fanapahana ho an'ny vokatra tsy mandeha.
Ny antony: ny fiasan'ny mpiasa tsy mety, ny olana amin'ny kalitaon'ny taratasy ifotony, ny tsy fahampian'ny vatana sns.
● Famaritana famaritana
Faritra very = (manapaka ny sakany × isan'ny fanapahana) × ny halavan'ny fanapahana × isan'ny antsy fanapahana ho an'ny vokatra tsy mandeha.
Fepetra fanatsarana: manamafy ny fitantanana mpandraharaha ary mifehy ny kalitaon'ny taratasy manta.
● Very vokatra very
Ny vokatra Super dia manondro ireo vokatra mahay izay mihoatra ny habetsaky ny taratasy voafaritra mialoha. Ohatra, raha taratasy 100 no kasaina hanomezana sakafo, ary 105 sheet ny vokatra mahafeno fepetra no omena, dia ny 5 amin'izy ireo dia vokatra tena lehibe.
Famaritana ny famolavolana: Faritra fatiantoka vokatra = (fanapahana sakany × isan'ny fanapahana) × halavan'ny fanapahana × (isan'ny mpanapaka ratsy-isan'ny mpanapaka voatondro).
Antony: be loatra ny taratasy eo amin'ny vala, ny taratasy tsy marim-pototra azo avy amin'ny fanondranana, sns.
Fepetra fanatsarana: ny fampiasana ny rafitra fitantanana famokarana corrugator dia afaka mamaha ny olan'ny fametahana taratasy tsy marina sy ny taratasy tsy marina azo amin'ny milina taila tokana.
Ny fanapahana dia manondro ny ampahany voapaika rehefa manapaka ny sisiny amin'ny alàlan'ny milina fanangonam-bokatra sy crimping an'ny milina tile.
Famaritana ny famolavolana: Faritra famoahana tratra = (sakan'ny fanitsiana taratasy an-tranonkala × isan-tsatoka) × halavan'ny fanapahana × (isan'ny vokatra tsara + isan'ny vokatra ratsy).
Antony: fatiantoka ara-dalàna, fa raha lehibe loatra izy dia tokony hohamarinina ny antony. Ohatra, raha 981 mm ny sakan'ny fanapahana ny baiko, ary ny haben'ny fanetezana farany ambany dia takiana amin'ny 20mm, dia ny 981mm + 20mm = 1001mm, izay lehibe kokoa noho ny 1000mm, dia mampiasa taratasy 1050mm fotsiny. Ny sakan'ny sisiny dia 1050mm-981mm = 69mm, izay lehibe kokoa noho ny fanetezana ara-dalàna, ka mitombo ny faritra very.
Fepetram-panatsarana: Raha ireo antony etsy ambony ireo dia diniho fa tsy nohaingoina ny baiko ary omena taratasy 1000mm ny taratasy. Rehefa vita pirinty ity farany ary ahodina ilay boaty, dia azo avotana ny taratasy 50mm sakany, saingy izany dia hampihena ny fahombiazan'ny fanontana. Ny fanoherana iray hafa dia ny departemantan'ny varotra dia afaka mandinika izany rehefa manaiky baiko, manatsara ny firafitry ny filaminana ary manatsara ny filaminana.
● Very fatiantoka
Tabbing dia manondro ny ampahany novokarina raha mila tranonkala taratasy malalaka kokoa hamelomana ny taratasy noho ny tsy fahampian'ny taratasy fototra amin'ny tranokala fototra. Ohatra, ny filaharana dia tokony hatao amin'ny taratasy miaraka amin'ny sakan'ny taratasy misy ny 1000mm, fa noho ny tsy fisian'ny taratasy fototra 1000mm na antony hafa dia mila omena 1050mm ny taratasy. Ny 50mm fanampiny dia fàfana.
Famaritana ny famolavolana: Faritra fatiantoka eo amin'ny fikandrana = (tranonkala an-taratasy aorian'ny tranonkala takelaka takelaka takelaka) × halavan'ny fanapahana × (isan'ny antsy fanapahana ho an'ny vokatra tsara + antsy fanapahana ho an'ny vokatra ratsy).
Antony: fitehirizana taratasy manta tsy misy antony na fividianana sampan-draharaha tsy ara-potoana ataon'ny sampana fivarotana.
Fomba fiasa fanatsarana: Ny fividianana ny orinasa dia tokony handinika raha toa ka mahafeno ny filan'ny mpanjifa ny fividianana taratasy sy ny stocking, ary manandrana miara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny fanomanana taratasy mba hahatsapany ny hevitry ny t-mode. Etsy ankilany, ny departemantan'ny varotra dia tsy maintsy mametraka lisitry ny fangatahana ara-pitaovana mialoha mba hanomezana boriboritany ny fividianana departemanta mba hahazoana antoka fa efa tafajoro ny taratasy voalohany. Anisan'izany, ny fahaverezan'ny vokatra kilema sy ny fahaverezan'ny vokatra super dia tokony ho an'ny fahaverezan'ny fahombiazan'ny departemanta famokarana baoritra mihombo, izay azo ampiasaina ho toy ny index index an'ny departemanta hampiroborobo ny fanatsarana.
2. Famoahana boaty fanontana
● fatiantoka fanampiny
Ny habetsaky ny famokarana fanampiny dia ho ampiana rehefa novonoina ny baoritra noho ny fitsapana ny milina fanontana sy ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny famokarana ny baoritra.
Famaritana ny famolavolana: Faritra fatiantoka fanampiny = fatra ampiana × faritra faritra misy ny boaty.
Antony: fatiantoka lehibe amin'ny milina fanontam-pirinty, haavo fiasan'ny mpandraharaha fanontam-pirinty, ary fahaverezan'ny famonosana amin'ny dingana manaraka. Ho fanampin'izany, ny departemanta fivarotana dia tsy mahafehy ny habetsaky ny kaomandy napetraka. Raha ny marina dia tsy ilaina ny manampy be loatra. Ny habetsahana be loatra dia hitarika amin'ny famokarana be loatra tsy ilaina. Raha tsy azo levonaina ny famokarana be loatra, dia ho lasa "lisitra maty", izany hoe, lisitra efa tara, izay fatiantoka tsy ilaina. .
Fepetra fanatsarana: Ity entana ity dia tokony ho an'ny fahaverezan'ny fahombiazan'ny departemanta boaty fanontana, izay azo ampiasaina ho toy ny index index an'ny departemanta mba hampiroborobo ny hatsaran'ny kalitaon'ny mpiasa sy ny haavon'ny asa. Ny departemantan'ny varotra dia hanamafy ny vavahady ho an'ny volan'ny filaminana, ary ny famokarana volan'ny famokarana sarotra sy tsotra Mba hanaovana fiovana, asaina ampidirina ny fampitomboana ny lahatsoratra voalohany hifehezana ny loharano hisorohana ny tsy ilaina loatra na ambanin'ny- famokarana.
● Manary fatiantoka
Rehefa novokarina ny baoritra, ny ampahany manodidina ny baoritra izay navilin'ny masinina manapaka dia ny fatiantoka.
Famaritana ny famolavolana: Faritra fihoaram-pefy =
Antony: fatiantoka ara-dalàna, fa ny antony tokony hofakafakaina raha be loatra ny habeny. Misy ihany koa ny milina famonoana ho faty, mandeha ho azy, ary semi-mandeha ho azy, ary ny fepetra takiana amin'ny sisin'ny takelaka takiana dia hafa ihany koa.
Fepetra fanatsarana: ny milina fanapahana maty isan-karazany dia tsy maintsy arotsaka miaraka amina sisin-tany mifanitsy aminy mba hampihena ny fatiantoka faran'izay betsaka araka izay azo atao
● Fahavoazana fanalefahana endrika feno
Ny mpampiasa baoritra sasany dia tsy mila famoahana tampoka. Mba hahazoana antoka ny kalitao dia ilaina ny mampitombo faritra iray manodidina ny baoritra tany am-boalohany (toy ny fampitomboana 20mm) mba hahazoana antoka fa tsy hivoaka ny baoritra mihodina. Ny ampahany nitombo 20mm dia ny fahaverezan'ny fanalefahana pejy feno.
Famaritana ny famolavolana: faritra feno fahaverezan'ny pejy feno = (faritra taratasy efajoro-tena faritra feno baoritra) × habetsahan'ny fanodinana entana.
Antony: fatiantoka ara-dalàna, fa rehefa be loatra ny habetsahana dia tokony hohalalinina sy hatsaraina ny antony.
Tsy azo esorina ny fatiantoka. Ny azontsika atao dia ny mampihena ny fatiantoka amin'ny ambaratonga ambany indrindra sy mitombina indrindra amin'ny alàlan'ny fomba sy teknika maro araka izay azo atao. Noho izany, ny maha-zava-dehibe ny fizarana ny fatiantoka ao amin'ny fizarana teo aloha dia ny famelana ny fizotrany mifandraika raha mitombina ny fatiantoka isan-karazany, na misy toerana tokony hatsaraina sy izay tokony hatsaraina (ohatra, raha very koa ny vokatra super lehibe, mety ilaina ilaina ny manamarina raha maka ny taratasy ilay mpirifiry. Marina loatra, very be loatra ny fatiantoka, mety ilaina ny mamerina mijery raha mitombina ny fanomanana taratasy tany am-boalohany, sns.) mba hahatratrarana ny tanjon'ny fifehezana sy mampihena ny fatiantoka, mampihena ny vidiny ary manatsara ny fifaninanana vokatra, ary afaka mamolavola tondro fanombanana ho an'ny sampana isan-karazany araky ny fatiantoka isan-karazany. Valio ny soa ary sazio ny ratsy, ary ampitombo ny hafanam-pon'ny mpandraharaha hampihena ny fatiantoka.